15 nooc oo cusub oo loo baahan yahay inay lahaadaan noocyada naqshadeeyayaasha, bilaash! | Abuurista khadka tooska ah
Melissa Perrotta | | Design Graphic, Fuentes
Sanadihii la soo dhaafay waxaan goob joog u ahaa kobaca suuqa qoraalka. Tani waa sida aan u aragnay muuqaalka isku dhufashada qoysaska noocyada cusub, labadaba serif, sans serif ama qoraalka iyo sidoo kale khiyaaliga ama qaababka mawduucyada.
Ifafaalahaan aasaaska qaab qorista farshaxan ahaan iyo xirfad ahaan intabadan waxay laxiriiraan kobaca warbaahinta iyo aaladaha casriga ah. Dareenkan, kororka nashqadda dhijitaalka ah waxay ka dhigtay lagama maarmaan in la kala duwo noocyada ku habboon qaabeynta. Dhinaca kale, waxay sidoo kale la xiriiri kartaa abuuritaanka barnaamijyada naqshadeynta qoraalka oo fududeynaya abuuristooda.
Si ka duwan naqshad nadiifka ah ee Dugsiga Switzerland; taas oo kheyraadku ay ku koobnaayeen qaababka joomatari aasaasiga ah, shabakadaha gorgortanka, iyo adeegsiga midabbo adag; naqshadeeyaha hadda wuxuu leeyahay noocyo fara badan oo xarfaha ah oo u oggolaanaya inuu horumariyo mashaariicda bandhig hal abuur leh.
Marka loo barbardhigo naqshadeynta nuskii hore ee qarnigii XNUMX-aad, maanta waxaa jira shaki la'aan fursado badan oo wax soo saar muuqaal ah. Tan waxaa loo aanayn karaa qayb ahaan kala duwanaanta ilaha sawirada kuwaas oo aan ka faa'iideysan karno. Sidan ayaan ku heli karnaa tayo wanaagsan iyo tayo liidata labadaba. Xaaladdan oo kale, waa masuuliyadda naqshadeeyaha inuu ogaado goorta iyo meesha loo adeegsanayo kheyraad kasta.
Si kastaba ha noqotee, waxa runta ah ayaa ah in illaa iyo hadda ay jiraan wax aad u badan qoysaska font yar kuwaas oo awood u yeeshay inay la tartamaan Helvetica, Baskerville, Gill Sans, Gotham iyo walaalahood.
Hoos waxaan ku tusi doonaa 15 nooc oo hadda ah oo muhiim u ah naqshadeeye kasta waxaanan ku siineynaa xiriiriyeyaal si aad u awoodo kala soo bax qoyska font si bilaash ah!
1 Matxafka Sans
4 Sanshe Centrale
5 Furan Sans
6 Xigasho sans
8 Cab Neue
11 cimilada wanaagsan
12 Qoraalka Crimson
Qoraal saaxiibtinimo oo mid kasta oo miisaankiisa ka mid ah. Isbarbardhig hooseeya oo ku habboon labadaba bandhig iyo analog.
Seddexdeeda nooc waxay leeyihiin astaamaha qaab casri ah oo jilicsan oo casri ah.
Waxay ugu yeeraan cusub Helvetica. Waxaa loo adeegsadaa in ka badan 25000 oo bog internet ah, anatomy-na waxay ka dhigaysaa mid ku habboon nooc kasta oo mashruuc ah.
Tani waa isha ay ka bogagga intarnetka badankood. Waa mid casriyeysan laakiin casri ah oo astaamihiisa ugu weyni tahay akhrin.
Nooca loo sameeyay in la isticmaalo en Bandhig ugu talagal Marka, waa sida akhriskiisu ugu fiicanyahay iyada.
Nooca qoraalka ee lagu qaatay nidaamka hawlgalka tufaaxa. Sida dhammaan alaabooyinka Apple qoraalkani farqi ahaan waa u qumman yahay.
Nooca sawirka ugu caansan tobankii sano ee la soo dhaafay. Isticmaalkeedu wuxuu noqday mid baahsan oo waa halyeeyada boodhadh badan iyo noocyo kala duwan.
Alégre wuxuu noqon karaa bedel kaamil ah loogu talagalay Bebas. Waxay ku kala duwan yihiin kerning iyo xaglaha qaar.
Waxay noqotay qoys caan ka ah awgood qaab fudud oo firfircoon taas oo ka dhigaysa mid ku habboon mashaariicda casriga ah, kuwa jilicsan ee jilicsan.
Waa nooc Serif ah oo leh astaamo adag laakiin leh dhamaadka wacigraphic style Waxa kale oo aad ka heli kartaa nooca Sans Serif.
Maaha mid ka mid ah noocyada ugu caansan ee xilligan xaadirka ah, laakiin astaamaheeda ayaa ka dhigaya mid ku habboon mashaariicda analog iyo qoraalka.
Mate waa nooc Serif ah oo loogu talagalay qoraalka. Hayso a qaab adag ayaa dhammaaday oo leh dhammaystir ballaaran oo loo yaqaan 'calligraphic' oo siiya shaqsiyad iyo firfircoonaan.
Waa nooc nooc ah oo leh dabeecad weyn, qaab jilicsan iyo jir sare ku habboon bandhigga iyo qoraallo gaagaaban.
Warnock malaha waa nooca Serif ee ugu labka badan iyo adag laakiin xarrago leh oo casri ah ayaa jiray.
Ma ogtahay farta kale ee aad rabto inaad ku darto liiska? U daa faallooyinka
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Khayraadka » Fuentes » 15 nooc oo cusub oo qasab ah, bilaash!
Aniga ayaa iska diiwaangaliyay boggan maxaa yeelay had iyo jeer wuxuu leeyahay waxyaabo aad u xiiso badan, aad baad ugu mahadsan tihiin dhammaan shaqadan deeqsinimada leh. Ku saabsan San Francisco, midka la soo dejisan karo lama mid yahay kan muunadda ku jira: malaha wax walba waa khaladkeyga oo waxaan soo degsaday wax aan ahayn, laakiin haddii tusaale ahaan aad ku aragto "y" ee tijaabada boggan. ka dibna waxaad aadeysaa xiriiriyeha isla marka aad gasho (adigoon xitaa u baahnayn inaad kala soo baxdo) waxaad arkeysaa in tan "iyo" aysan isku mid ahayn. Midkani halkan wuxuu umuuqdaa mid qurux badan oo aad uqurux badan, anigoo u malaynaya in aragtidayda aysan khalad ahayn, ma ogtahay meesha aan kaheli karo ama ugu yaraan maxaa loogu yeeraa? Aad baad u mahadsantahay!
Ku jawaab ambrasc